EYASENTLANGO 29 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EYASENTLANGO 29EYASENTLAN ... 29
Amadini ethuba lonyaka omtsha
291“Ngomhla wokuqala kwinyanga yesixhenxe makube yintlanganiso eyodwa yokunqula, ningawuphathi umsebenzi. Ngaloo mini ke makukhaliswe amaxilongo. 2Yenzelani *uNdikhoyo idini elitshiswayo elivumba likholekileyo kuye: inkunzi yenkomo eselula, inkunzi yegusha, nesixhenxe samaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 3Makwenziwe umnikelo weenkozo ngomgubo wengqolowa oxutywe namafutha omnquma: iikhilogram ezintathu zomgubo wengqolowa zohamba nenkunzi yenkomo, iikhilogram ezimbini zihambe nenkunzi yegusha, 4ixhwane ngalinye lihambe nekhilogram enye. 5Ngokunjalo makwenziwe nedini lesono ngebhokhwe eliduna ukuze nicanyagushelwe. 6La madini ke ongeza laa madini atshiswayo enziwa rhoqo kusuku lokuqala enyangeni nomnikelo weenkozo, ngokunjalo nedini elitshiswayo lemila ngemihla elihamba nomnikelo weenkozo nothululwayo. La madini omlilo alivumba elimnandi kuNdikhoyo.”
Amadini omhla wocamagushelo
7“Ngomhla weshumi kwinyanga yesixhenxe makube yintlanganiso eyodwa yokunqula, ukutya nomsebenzi kuzilwe. 8Yenzani idini elitshiswayo; lona lilivumba eliyolileyo *kuNdikhoyo: inkunzi yenkomo eselula, inkunzi yegusha nesixhenxe samaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 9Yenzani umnikelo weenkozo ngomgubo wengqolowa oxutywe namafutha omnquma: iikhilogram ezintathu zihambe nenkunzi yenkomo, iikhilogram ezimbini zihambe nenkunzi yegusha; 10ikhilogram enye yona ihambe nexhwane ngalinye. 11Makwenziwe idini lesono ngebhokhwe eliduna ukongeza kulaa bhokhwe yocamagushelo nedini elitshiswayo lemihla ngemihla elihamba nomnikelo weenkozo nothululwayo.”Nqulo 16:29-34
Amadini ngethuba lomsitho wamaphempe
12“Ngomhla weshumi elinesihlanu kwinyanga yesixhenxe makube yintlanganiso eyodwa yokunqula, ningawuphathi umsebenzi. Yenzelani *uNdikhoyo itheko iintsuku zibe sixhenxe. 13Ngalo mhla wokuqala yenzelani uNdikhoyo idini lomlilo elivumba limnandi kuye: ishumi elinesithathu leenkunzi zeenkomo eziselula, iinkunzi zeegusha zibe mbini, neshumi elinesine lamaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 14Yenzani umnikelo weenkozo ngomgubo wengqolowa oxutywe namafutha omnquma: iikhilogram ezintathu zomgubo zihambe nenkunzi yenkomo nganye, iikhilogram ezimbini zihambe nenkunzi yegusha nganye, 15ize ikhilogram yomgubo ihambe nexhwane ngalinye ngokunjalo neminikelo ethululwayo. 16Makwenziwe nedini lesono ngebhokhwe eliduna. Onke ke la madini ongeza idini elitshiswayo lemihla ngemihla elihamba nomnikelo weenkozo nothululwayo.
17“Ngosuku lwesibini makwenziwe amadini ngeenkunzi zeenkomo eziselula zibe lishumi elinambini, iinkunzi zeegusha zibe mbini, neshumi elinesine lamaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 18-19La madini ke ohamba nalawo ayimfuneko ndawonye neminikelo kusuku lokuqala.
20“Ngosuku lwesithathu makunikelwe ishumi elinanye leenkunzi zeenkomo eziselula, isibini seenkunzi zeegusha, neshumi elinesine lamaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 21-22Ngokunjalo ke ohamba naloo madini ayimfuneko ndawonye neminikelo kusuku lokuqala.
23“Ngosuku lwesine makunikelwe ishumi leenkunzi zeenkomo eziselula, isibini seenkunzi zeegusha, neshumi elinesine lamaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 24-25Ngokunjalo ke makahambe naloo madini ayimfuneko ndawonye neminikelo kusuku lokuqala.
26“Ngosuku lwesihlanu makunikelwe iinkunzi zeenkomo eziselula zibe lithoba, iinkunzi zeegusha zibe mbini, neshumi elinesine lamaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 27-28Ndawonye nawo ke makwenziwe nalaa madini kwaneminikelo eyimfuneko kusuku lokuqala.
29“Ngosuku lwesithandathu makunikelwe isibhozo seenkunzi zeenkomo eziselula, iinkunzi zeegusha zibe mbini, namaxhwane angamaduna alishumi elinesine, angenasiphako onke. 30-31Lawo ayimfuneko ndawonye neminikelo kusuku lokuqala nawo makangasileli.
32“Ngosuku lwesixhenxe konikelwa isixhenxe seenkunzi zeenkomo eziselula, neenkunzi zeegusha ezimbini, ndawonye neshumi elinesine lamaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 33-34Ngokunjalo ke makwenziwe naloo madini ayimfuneko ndawonye neminikelo kusuku lokuqala.
35“Ngosuku lwesibhozo makube yintlanganiso eyodwa yokunqula, ningasebenzi. 36Makwenziwe idini elitshiswayo libe lidini lomlilo elimkholisayo uNdikhoyo: inkunzi yenkomo eselula, inkunzi yegusha, nesixhenxe samaxhwane angamaduna, angenasiphako onke. 37-38Ngokunjalo ke namadini ayimfuneko ndawonye neminikelo ngosuku lokuqala makangasileli.Mfud 23:16; 34:22; Hlaz 16:13-15
39“Le ke yimimiselo mayela namadini atshiswayo, neminikelo yeenkozo nethululwayo, neyobudlelwane, ekufuneka niyenzele uNdikhoyo ngokusesikweni ngamaxesha ayo. La madini neminikelo ongeza kumadini ezithembiso okanye awokuqhutywa yintliziyo.”
40Ngenene ke uMosis wawaxelela amaSirayeli konke awayekuyalelwe nguNdikhoyo.